सेल्फी मुद्दा बाँदरले हार्यो, बाँदरले पाएन फोटो, जसको क्यामरा उसकै हक ! – Deshko News
Home » विचित्र दुंनिया » सेल्फी मुद्दा बाँदरले हार्यो, बाँदरले पाएन फोटो, जसको क्यामरा उसकै हक !
सेल्फी मुद्दा बाँदरले हार्यो, बाँदरले पाएन फोटो, जसको क्यामरा उसकै हक !
फोटोग्राफर डेभिडले आफू पनि वन्यजन्तु संरक्षणवादी रहेको भन्दै यो फोटोका कारण इण्डोनेसियाली वन्यजन्तुको संरक्षणमा ठूलो फाइदा पुगको दाबी गरे ।
बिहे गरेको पाँच दिनपछि खुल्यो दुलाहाको रहस्य, तर दुलहीले छुटिन मानिन्
जसले तीन वर्षसम्म फ्रिजमा राखे आमाको मृत शरीर, यस्तो छ पत्याउनै नसकिने कारण
यतिसम्म हुन्छ प्लाष्टिक सर्जरीको शोकः यी महिलाले गरिन् दुई सय पटक सर्जरी
धर्तीमै असली पाताल, जमिनभित्रै लुकेको छ यस्तो सच्चाई
जहाँ सित्तैमा सेक्स गर्न पाइन्छ ! महिलाले राख्छिन् यस्तो शर्त
अमेजनमा भेटियो अनौठो पन्छी, विज्ञान जगतमा मच्चियो खलिबली